Video Editing အကြောင်းလေးတွေ ... - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကျနော်တို့ ဒီနားလေးကနေ Video Editing စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို မတွေ့မိလို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေများရင် ကျနော် ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ဗျာ ... တတ်လို့ သိလို့ တော့ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ ... သိသလောက်ကလေးပေါ့ ... စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေရှိခဲ့ရင် Premiere CS2& တခြားလိုတာလေးတွေပါ အခြေခံ ကနေ ဆွေးနွေး ပေးပါမယ် ... စိတ်ဝင်စားသူတွေရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျနော် လည်းရေးရတာ အချိန်ကုန်ရကျိုးနပ်အောင် ဖတ်တဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေလည်း အကျိုးရှိအောင် အခြေခံကစရှင်ပြီး ခွေတစ်ခွေ ကိုယ်တိုင် ထုတ်နိုင် သွားတဲ့ အထိ ကျိုးစားပေးသွားပါမယ် ... ခွေ ထုတ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်တွေဘာတွေကတော့ ကျနော်နဲ့ဆိုင်ဘူးနော် ... ကဲ့ဗျာ တစ်ပတ်လောက်စောင့်ကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ များတာနဲ့ နည်းနည်းချင်း စဆွေးနွေးသွားမယ်ဗျာ ...
ဒီနေရာလေးမှာ ကျနော်ခံစားချက် ကလေး တစ်ခု ရင်ဖွင့်ပါရစေဗျာ အသင်း ၀င်ထားတာက တော့ကြာပါပြီ ... ဒါပေမယ့် မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး ... ဖတ်ပဲဖတ်တယ် အကြောင်းပြချက်ကတော့ အရမ်းကောင်းဗျာ ... ဘာတဲ့ ငါဘာမှမသိသေးပါဘူးလေပေါ့ ... ကျနော် ဒီမိသားစုကနေ ယူတာတွေ ဖတ်တာတွေ ဘယ်သူမှ မသိခဲ့သိတိုင် ကျနော် အသိဆုံးပါဗျာ လောကကြီးမှာ ဘယ်နေရာမှာမှ အယူသက်သက်ကြီးတော့လည်း မဖြစ်ချင်ဘူးဗျာ ပေးမယ်ဆိုတော့လည်း ပေးစရာက အများကြီးမရှိ အယူသက်သက်ကြီး မဖြစ်ရအောင် ရှိတာလေးတွေပဲ ဖျစ်ညှစ်ပြီးထုတ်ပေးရတာပေါ့ဗျာ
ဒီနေရာလေးမှာ့ပိုစ် အများကြီး တင်သွားတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမ တွေအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ...
ဘာလိုလည်းဆိုတော့ ကိုယ်တိုင် ရေးမှပဲ ပိုစ် တစ်ခုတင်ဖို့ အချိန်ပေးရမှန်း သိတယ် ... ဖတ်တုန်းကတော့ မသိခဲ့ဘူး
( ဒီလိုပဲ သားကတော့ ဖတ်ပြီး copy & paste လုပ်ထားလိုက်တာပဲ )
မိသားစုဝင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် သိတာလေးတွေမျှဝေသွားမယ်ဗျာ ...
Last edited by bonge; 24-01-2009 at 04:19 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 84 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, ဆင်ကလေး, ဆန်းမောင်, ညီညီ(ပုဂံ), ဒဿဂီရိ, ဖန်ဆင်းရှင်, ဖိုးထိန်, ဖယောင်း, မင်းမဟူရာ, မိုးလွင်, မျက်ဝန်း, ရန်ရန်လင်း, ရာမ, ရှိုင်းသော်တာမင်း, လူမုန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သားညို, သူရိယ, ဟန်ဇော်, ဟိန်းသိန်းအေး, ဟိန်းသူအောင်, ကျော်စွာမင်း, ကျော်ကြီး, ဇေယျာမင်းထက်, ဇော်ရဲပိုင်, တေလေ, နေသစ္စာ, လေပြေညင်း, အောင်မင်းကို, ဖြိုးယံလေး, မြန်အောင်သား, aeiou, always528, Anti_Spyware, aozora, aung myint, aung.123a, aung174, AZM, blackNwhite, carnationflower, chitnyimalay, Ei Hninn, hazyworld, hellboy, hlamyoswe, hta, ko lin, ko myo, KoBaKhat, kokomaung.ko28, kyansitthar, kyawmin, KznT, linntayzar, linthuraaung, lwanthu, minthumon, moe z, moeyetkh, mothautkyae9, myatnoethu, myatthu, naingthu, nyi nge, peacelover, Phoekwarlay, phoetharlay, phyomyintthein, sAnDViper, smlat88, thetzin, thurein, thureinsoe, tu tu, wahgyi, warrior, yawnathan, Ye Naung, zinkomin, zinnaing, zo
24-01-2009, 08:52 AM
ပို့စ် 147 ခုအတွက် 570 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ညီမ စီအက်စ် ၂ တက်ဖူးတယ်မေ့ကုန်ပီ အကိုအကိုထာဝရအောင်မြင်ပျော်ရွှုင်ပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ဖယောင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, bonge, kyansitthar, minthumon, thureinsoe
Visit ဖယောင်း's homepage!
Find More Posts by ဖယောင်း
နည်းနည်းပါးပါးပဲကစားဖူးတော့ မကျွမ်းကျင်သေးပါဘူး မသုံးတာများတော့ မေ့နေပါပြီဗျာ..........
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ moeyetkh အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, bonge, kyansitthar, linthuraaung, minthumon
အစ်ကိုကသာသင်ပေးမယ်ဆိုရင် ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ သင်ကြားပါ့မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ngwe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, အေးချမ်းမောင်မောင်, kyansitthar, linthuraaung, minthumon
မေတ္တာစိတ်ကိုယ်စီနဲ့သတိရနေကြ မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဝေးဝေး နီးနီးလေးပါပဲ။ -- ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ အစီအစဉ် လုပ်ပါဗျာ ကျွန်တော်လဲ စိတ်ဝင်စားတယ် ဘာမှမတတ်ဘူးနော် စိတ်ပဲဝင်စားတာ သေချာရှင်းပြ မသိလို့ကတော့ မေးပြီပဲ စိတ်တော့ မညစ်နဲ့ပေါ့နော် အစ်ကို သင်တန်းစမဲ့ အချိန်ကိုစောင့်နေမယ်ဗျာ
အစ်ကိုရေ သင်တန်းက ဘယ်နေ့စမှာလည်း မြန်မြန်လေးနော်
ကိုလေးအောင်, အေးချမ်းမောင်မောင်, minthumon
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ ... အားပေးမူ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ဆရာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် လိုတာပိုတာလေးတွေကို ပြုပြင်သွန်သင်လမ်းညွန်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ခံယူဖို့ အသင့်ပါဗျာ ...
ကျနော် က တစ်ပတ်လောက် စောင့်မလားလို့ လိုတဲ့ ဖိုင်လေးတွေပါ တစ်ခါတည်းတင်ပေးလို့ ရအောင် upload လုပ်နေပါပြီ။ ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းတင်ပေးပါမယ် ... နည်းနည်းချင်း ကြိုးစားပြီး တင် သွားမယ်ဗျာ ...
Intro လေး စပေးခဲ့မယ်ဗျာ ...
စာလိုကြီးတော့ မပြောချင်ဘူး စာလိုကြီး လည်းမသိလို့ပါ ... ကျနော် သိသလောက်ပေါ့ နော် ... video editing လုပ်တဲ့ soft တွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ ဆိုကြပါစို့ ulead9၊ ulead 10 ၊ ulead 11 ..etc ၊ ပြီးတော့ premiere 1.5 ၊ premiere 2.0 ၊ premiere 3.0 ခု premiere 4.0 ထွက်နေပါပြီ။ version တွေ ဘယ်လိုပဲပြောင်း ပြောင်း သဘောတရားကတော့ အတူတူပါပဲဗျာ ...
ulead မှာ ဆိုရင်
ulead 6.0 က နေစပြီး ကျနော် သုံးဖူးတာပါ။ ခု ကျနော် ဆီမှာ ulead 11 ရှိပါတယ်။ သဘောတရား အတူတူပါပဲ။ ulead version တစ်ခုခုကို ကောင်းကောင်း သုံး တတ်ထားရင် နောက်မြင့်လာတဲ့ version တွေကိုလည်း သုံးတတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ version ကို မြင့်ပေးလိုက်တာပါ။ လုံးဝကြီးပြောင်းမသွားပါဘူး။ အဲတော့ အဆင်ပြေတဲ့ version ကို သုံးပါ။ ပေါ်ပင်ကို လိုက်ပြီး အချိန်ကုန်သွားတာမျိုးလည်း မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ version မြင့်လာတာနဲ့အမျှ effects လေးတွေ ပိုကောင်းလာတယ်။ file format တွေ စုံလာပါတယ်။ video camera တိတ် နဲ့ တုန်းက ပြန်ကူးဖို့ အတွက် premiere ကို သုံးနေပေမယ့်၊ ulead 11 ထွက်နေပေမယ့် အဲဒီတုန်းက capture ဖမ်းဖို့ ulead 8 ကိုပဲ ရွေးခဲ့ပါတယ်။ သူနေရာနဲ့ သူပေါ့ဗျာ ...
Premiere မှာ ဆိုရင်
premiere 1.5 အရင် ထွက်တဲ့ version တွေရှိပါတယ်။ ပြီးမှ တစ်ပတ်လည် နံပတ်ပြန်ထွက်လာပါတယ်။ premiere 1.5 ၊ ခု latest က4ပေါ့။ 1.5 & 2.0 & 3.0 သိပ်မကွာလှဘူးဗျ။ effect တွေပဲ ပိုလာပါတယ်။ ကျန်တာတွေတော့ သိပ်မထူးပါဘူး အဲ ထူးတာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာ premiere မှာ version မြင့်လာတာနဲ့အမျှ အရမ်းလေးဗျာ ဒါကြောင့် လည်း ကျနော် 2.0 ကို ရွေးလိုက်တာပါ။ 3.0 က တော်တော်လေးတယ်ဗျာ ...
video editing သမားတွေ အတွက်ကတော့ Run များများ၊ Processor speed ကောင်းကောင်း ၊ Hard Disk များများ ဒါဆိုရပါပြီ။ အရေးကြီးဆုံး တစ်ခုကတော့ စိတ်ရှည်ရမယ်နော် photoshop တို့ Editing တို့ က စိတ်ရှည် တဲ့ လူတွေ အတွက်အရမ်းကောင်းဗျာ ... အချိန်ကုန်မြန်ချင်ရင် ကျနော် premiere ဖွင့်လိုက်ရင် တော်တော် ကုန်တာမြန်တယ်ဗျာ ... နောက်ပြီး Project တစ်ခုထားစေချင်တယ်။ အဲဒါမှလည်း လုပ်ဖြစ်မှာလေ။ လုပ်ဖြစ်မှလည်း လုပ်ရင်းအတွေ့အကြုံရမှာ သိမှာလေ။ ဥပမာ- ကောင်မလေးပေးဖို့ ၊ ယောင်္ကျားလေးပေးဖို့ စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ ... ဒါဆိုတော်တော်လုပ်ဖြစ်တယ် ...
ကိုယ်ပိုင်ခွေလေးထွက်သွားတော့လည်း ကျေနပ်စရာကြီး ...
Ulead ထက် Premiere ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ effect တွေကို ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးတွေကောင်းရင် ကောင်းသလို ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ Video Camera သမားတွေ အတွက် အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ ... Ulead မှာကျတော့ အရမ်းမရဘူး။ သူပေးထားတာလေးတွေနဲ့ ပဲ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ကြရတာ။ Premiere ကြတော့ သူပေးထားတာ ကို ကိုယ့် စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ ထပ်ပြီးပြင်လို့ရသေးတယ်။ ဖိုင်တိုက်တွေ တော်တော်များများ လည်းရပါတယ်။ video ဖိုင်တွေတော်တော်များများ မရတတ်ဘူးဗျ ... စိတ်မပူပါနဲ့ ရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်... psd ဖိုင်တွေပါ သူဆီမှာ ဒီတိုင်သုံးလို့ ရလို့ Photoshop တက်တဲ့ သူတွေ အတွက် ပျော်စရာကြီးဗျာ
ကဲဒီလောက်ဆို intro အတွက် ကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ် ... မကျေနပ်သေးရင်လည်း ရော့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဆီသောက်သွားကြပါ။ မလောက်ရင်ပြော ... Premiere 2.0 နဲ့ပဲ စမယ်နော် ... ကျနော် လည်းကျောင်းစာက တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ စိတ်ရှည်ပေးကြပါဗျာ နော် ... အဲဒါကြောင်မို့ Editing လုပ်မယ်ဆိုရင် အစောကြီး ကတည်းကတိုင် စိတ်ရှည်ရမယ်လို့ ပြောထားတာ အပြင်မှာ တစ်ခွေကို တော်တော်ပေးရတယ်။ 1 နာရီလောက်ကို ၁ သိန်းခွဲ တဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ effect လည်း မပါဘူး။ အရည်တွေကြီးပဲ
အပြင်မှာ တက်ချင်လွန်းလို့ သွားတက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပိုက်ပိုက်တွေလည်း ယူတယ် ... လူကိုလည်း နိမ်တယ်ဗျာ Camera ထဲကနေ Flash ထဲကို ထည့်တာတောင် 1000 ယူတယ်။ သင်တန်းတိုင်းတော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကျနော် တက်ခဲ့တာလည်း နာမည်ကြီး သင်တန်းပါပဲ။ မီးမလာလို့ ရယ် မီးလာတော့လည်း ကောင်းကောင်း မသင်ပေးဘူး။ Course ကို ကြာကြာဆွဲပြီး တကယ်မသင်ပေးဘူး။ မတက်လို့ လာသင်တာကို နိမ်တာ အဆိုးဆုံးပဲ ... တက်အောင်သင်ပေးပါ။ ထပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ အဲလိုတော့ ရဖူးလေတဲ့ အော် ငါမှ မတက်တာပဲလို့ ...
ဒီခံစားချက်လေးတွေ ကျနော်မှာ ရှိတယ်။ ကျနော် ကို ပေးရမှာ က စိတ်ဝင်စားမူ့နဲ့ တကယ့်လုပ်ဖို့ ....
ကျနော် ခင်ဗျားတို့ကို ပေးမှာ က အချိန် မကျေနပ်သေးရင် ကော်ဖီ တိုက်လိုက်မယ် အချိန်ထက်တော့ ဘယ်အရာမှ ???................
အောက်ပါအသင်းဝင် 55 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ဆန်းမောင်, ဒဿဂီရိ, ပုထုဇဉ်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဖိုးထိန်, ဖယောင်း, မျက်ဝန်း, မျိုးမင်းငယ်အောင်, ရန်မျိုးအောင်, ရန်ရန်လင်း, ရဲသွေးန်း, ရှင်းလေး, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, သျှယုနို, အိမ့်ဖြူ, ကျော်စွာမင်း, ကျော်ကြီး, ဇေယျာမင်းထက်, ဇော်လေးထွန်း, အောင်ထက်ကျော်, အောင်မိုးထွန်း, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးယံလေး, aung myint, aung174, blackNwhite, carnationflower, Ei Hninn, hellboy, khaing king, ko lin, ko myo, kokomaung.ko28, kyansitthar, KznT, linthuraaung, minthumon, moeyetkh, myatthu, nyi nge, paulgyi, peacelover, Phoekwarlay, phoetharlay, sawlinux, smlat88, thetzin, thureinsoe, tu tu, wahgyi, yawnathan
25-01-2009, 09:56 PM
ကိုဗိုလ်ငယ်ရေ.... ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်...ကျွန်တော့်မှာ အရေးကြီးတာက software မရှိဘူးလေ....
သေချာအောင် ကိုဗိုလ်ငယ်ဆီမှာတောင်းမလို့လေ....ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ Ulead 12(trial vision) နဲ့ Movie_Edit_Pro_2004 ပဲရှိတယ်....ကူညီပါဦး ကိုဗိုလ်ငယ်ရေ....အားကိုးပါတယ်ဗျာ.....
Last edited by မင်းသီဟထွန်း; 25-01-2009 at 09:58 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ မင်းသီဟထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, kyansitthar, linthuraaung, minthumon, thetzin
ပို့စ်5ခုအတွက် 16 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း သူများရေးတဲ့စာတွေကိုဖက်နေရ သူပါ။တကယ်ပါ....လုံးဝကိုအားကျသွားပြီ အကို..။ကျွန်တော် ကဘာမရေးဘူးစိုတာ ဘာမှကို သိလို့ပေါ့..။ဟီး...ဟီ.....။အကိုတက်အောင်ကိုသင်ပေးရမယ်နော်....။ ..ကော်ဖီ သောက်ပါဦးနော်။ဒါနဲ့ ဒီ software လေးမရှိလို့ တခါတည်း တင်ပေးစေ ချင်ပါတယ်....Premiere 2.0
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ kozaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by kozaw
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျို့ ဦးငယ်ရေ...... အားပေးတယ် ဒီတော့ပစ်ကလေးက အသစ်လေးဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ....ကျွန်တော်လည်း ဂျစ်ဂျစ်(ချစ်ချစ်)ကို ပရီးမီးယားလိဒ်..အော်ဟုတ်ပါဘူး ပရီးမီးယားနဲ့ video eddition လေးတွေလုပ်ပေးချင်လို့ဂျ :.... နောက်နေ့ တွေမှာ ဦးငယ် သင်တန်းစရင်
အနော်လည်း လာတတ်မယ်... :
:27: :20: ကောင်းမှုမြတ်နိုး ကောင်းအောင်ကျိုး၍ ကောင်းကျိုးကိုယ်၌ တည်စေမင်း :24::20:
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ကိုရင်သာဂိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကိုရင်သာဂိ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ...
ကျနော် မှာ ရှိတာလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ လုပ်ဖြစ်အောင်သာ လုပ်ကြပါလို့ ထပ်မံ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ ...
Ulead version 8.0 =>
Ulead version 10.0 =>
Ulead version 11.0 =>
Premiere Version 2.0
အောက်က ဖိုင်က Premiere Keygen ဖြေတာလေး ပြထားတဲ့ video ဖိုင်လေးပါဗျာ။ CS & CS2တို့ကို activate လုပ်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ပေါ့ဗျာ
ULEAD DVD WORKSHOP 2.0 ကတော့ Menu ဖောက်ဖို့ သုံးပါတယ်။ သူလည်း version အသစ်ထွက်နေပါပြီ။ fast play တွေ ထည့်တာတို့ frame လှလှလေးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာ ... နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်။
Ulead MediaStudio Pro v7.0 က version အသစ်ထွက်နေပါပြီ။ မရှာချင်တော့လို့ ရှိတာလေးပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ ... ဒီ soft လေး ကိုတော့ ကျနော် က Premiere နဲ့ရော သုံးပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ သဘောကျစရာ ကောင်းတဲ့ effect လေးတွေက တိမ်လေးတွေရွေ့နေတာမျိုး ၊ မီးရူးမီးပန်းလေးတွေ ၊ Ulead မှာ မပါတဲ့ တခြား စိတ်ဝင်စားစရာ effect လေးတွေ ပါပါတယ်ဗျာ ... soft တွေက တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ပေါင်းသုံးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ တစ်နေရာ မှာ မရတာကို ရတဲ့နေရာကနေ ယူသုံးရင် ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်။ ဒီ Ulead MediaStudio Pro v7.0 ဘာထပ်ကောင်းသေးလဲ ဆိုရင်
ဥပမာ- ဇာတ်စရာ အလိုကျ သီချင်းပါတဲ့ series ခွေ ဘာပါလိမ့်ဗျာ ထားပါတော့ အဲဒီထဲမှာ ကျနော် မှတ်မိသလောက် နောက်ဆုံးထင်တယ်။ ဒီ soft နဲ့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကျနော် မှတ်မိသလောက်
=> ပန်းပွင်းတွေကို ဘယ်သူက မှ ပစ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ လှမ်းယူတဲ့ ပုံစံလုပ်လိုက်တာ သူလက်ထဲကို ပန်းတွေ ရောက်လာတယ်
=> အောက်မှာ ကျနေတဲ့ ပစ္စည်း ကို ကို ကုန်း မကောက် ဘဲ ဒီတိုင်း ယူလိုက်တာမျိုး အဲဒီ အခွေမှာ တော်တော် သုံးထားတယ်ဗျ ... နောက် ကောင်းတဲ့ action က
=> တစ်စစီ ဖြစ်နေတဲ့ keyboard ကို ဒီတိုင်းကြီး လမ်းယူသုံးလိုက်တာမျိုး
=> slow motion ချစ်သူနဲ့ တွေ့ခါနီးလေးမှာ သုံးကြတယ်
အဲဒါတွေ အားလုံး Ulead MediaStudio Pro v7.0 မှာ ရပါတယ်ဗျာ ဒါကြောင့် ဒီ soft ကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီ soft နဲ့ ပတ်သတ်တာရယ် Menu ဖောက်တာရယ် ကတော့ နောက်မှ အသေးစိတ် ထပ်ဆွေးနွေးပေးပါမယ် ...
ကဲ တင်ပေးလိုက်ပြီဗျာ ... လုပ်ဖြစ်ဖို့တော့ လိုတယ်နော် ဖိုင် ဆိုက်တွေက များလို့ အဆင်မှ ပြေပါ့မလား မသိဘူးဗျာ အဆင်မပြေရင်လဲ ပြေအောင် အတတ်နိုင် ဆုံး ကျိုးစားပေးပါမယ်။ ဒီမှာ လည်း ကူညီမယ့်သူတွေ ရှိပါတယ်။
မြန်မာလိုရေးတဲ့ ဖိုရမ်တွေ အများကြီး ပေါ်လာတာ အားကြီး ဂုဏ်ယူမိတယ်ဗျာ ...
ကြီးကျယ်တာတော့ ဟုတ်ဘူးနော် ... တို့ မြန်မာတွေ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာပေါ့ဗျာ
အများကြီး မစွမ်းနိုင်ပေမယ့် စွမ်းနိုင်တဲ့ ဖက်က ကျိုးစားကြဖို့ ပါပဲ ...
ဘာမှမလုပ်ရင် ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်နေတဲ့ သူအတွက် အမှား အယွင်းလေးတွေ တော့ ရှိတက်ပါတယ်ဗျာ ... မကြိုက် တာလေးတွေ ရှိခဲ့ရင်တော့ သည်းခံ ခွင့်လွတ်ပေးကြပါလို့ ...
ကျနော် က ကိုယ်ကိုယ့်ကို ၁၆ ၁၇ ပဲ ထင်နေတုန်း မလိမ်ဆိုး မလိမ်မာလေးမို့ ပါ
Last edited by bonge; 07-07-2009 at 07:50 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 53 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုဦး, ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, ဒဿဂီရိ, ဖိုးထိန်, ဖယောင်း, မျိုးမင်းငယ်အောင်, ရန်ရန်လင်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သစ္စာလင်းလင်း, သူရိယ, ဦးသာကြီး, ဧရာမြေ, ကျော်ကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်မောင်လေး, အောင်ထက်ကျော်, အောင်ကျော်ဆန်း, ငြိမ်းချမ်း, ပြာဂလောင်, ဖြိုးယံလေး, always528, aung myint, aungphyo, AZM, blackNwhite, carnationflower, Ei Hninn, hlamyoswe, ko lin, ko myo, kokomaung.ko28, kyansitthar, lifemark, maJunior, mrzaw, nyi nge, paulgyi, phoetharlay, phyomyintthein, smlat88, stability09, thatpan, thetzin, thurein, thureinsoe, tu tu, wahgyi, yawnathan, zarche
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 20 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
software တော်တော်များများတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းသုံးဘူးတယ်
နောက်ပြီး ကျွန်တော် system requirement တွေလည်းသိချင်တယ်
အဓိက က HD format 1920x1080 resolution ကို edit လုပ်ဖို့ system requirement ကိုသိချင်တာ
ကျွန်တော် computer က model နိမ့်တော့ resolution ကို DVD quaility နဲ့ပဲရိုက်နေ၇လို့ပါ
အခု ကျွန်တော် sony vegas ကိုစမ်းသုံးနေတယ်
တခြား HD format support လုပ်တဲ့ software လေးတွေကိုလည်းသိချင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ mrzaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, kyansitthar, paulgyi
Find More Posts by mrzaw
အကို ရဲ့ သင်ကြားပို့ ချမူ့ ကိုလည်း ကျနော်လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ အဲဆော့ဝဲတွေ အသုံးပြုပုံ အသုံးပြုနည်းလေးကို PDF လေးနဲ့ တင်ပေးရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဒါမှအကိုလည်းကျောင်းသားတွေ များလာရင် ရှင်းရတာမမေား မှာ ဆရာက မလာသေးဘူး ကျောင်းသားတွေက စုံနေပီ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ win zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, linthuraaung, thetzin
Originally Posted by mrzaw
ကို mrzaw က ဘယ်လို soft တွေ ကို သုံးဖူးတာလဲ။ ကျနော် က အများကြီး တော့ မသုံးဖူးဘူးဗျ။ ကျနော် သိတာက အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ soft လေးတွေပဲ သိပါတယ်။ ဘာ soft နဲ့ editing လုပ်ချင်တာလဲ ခင်ဗျာ ... Premiere နဲ့ ဆိုရင် တော့ ကျနော် ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။ after effect ဆိုရင် အရမ်းကောင်းပေမယ့် မစမ်းနိုင်သေးဘူး။ ရိုးရိုး editing လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်လည်း အဲလောက် မလိုဖူးလဲ ထင်လိုပါ။ ကျနော် မသိတဲ့ soft တွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ခွင့်လွတ်ပါဗျာ ... ကျနော် အရမ်းတတ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ... အစောကြီး ကတည်း က request လုပ်ထားပါတယ် ကွန်ပျူတာ က ဘယ်လောက် ဘယ်လိုလဲဗျာ ... Ram ? processor ? sony vegas ဆိုတာကို ကျနော် မသိပါဘူးဗျာ ... ဘာကြီးတုန်း
တခြား HD format support လုပ်တာဆိုတာ ကျနော် နားမရှင်းဘုးဗျ။ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ဘာကို သိချင်တာလဲ မသိဘူးဗျာ ... Premiere နဲ့ကတော့ တော်တော်လေး ရပါတယ်။ သူအပြင် ကျနော် အပေါ်မှာ အကြံပြုထားတဲ့ အတိုင်း လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အပြင်က VCD လိုတော့ ကောင်းကောင်းရသွားနိုင်ပါတယ်။ Video Camera သုံးနေတယ် ဆိုရင်တော့ သူ့ resolution ပေါ်မှာပဲ မူတယ်ပါတယ်။ ကို လိုချင်တဲ့ setting ကို တစ်ခါတည်း ပြောင်းပြီး ရိုက်ပြီး editing လုပ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် .... သိသလောက်ကလေးကိုပဲ မသိသေးသူတွေ သိသွားအောင် share ချင်တာဖြစ်လို့ အမှားအယွင်းလေးတွေ ရှိရင် ပြုပြင်ပေးပါဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုကိုသီဟ, ကိုလေးအောင်, ဖယောင်း, ကျော်ကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, ငြိမ်းချမ်း, ဖြိုးယံလေး, Ei Hninn, ko lin, ko myo, kyansitthar, nyi nge, paulgyi, smlat88, thetzin, thureinsoe, tu tu, yawnathan, Ye Aung
အစ်ကိုရေ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ adobe premier နဲ့ ဆိုရင် ပိုလို့စိတ်ဝင်စားမိတယ်
သင်တန်းက စတော့ဗျာ ။သင်ချင်လှပြီခင်ဗျာ
ဟိုက် ဒီထဲမှာတောင် လာအိပ်ပြနေပါလား မခန့်တာ ဒီကျောင်းသား စော်လွတ်လိုက်မှပဲ ကျနော် report တစ်ခု လုပ်နေရလို့ နောက်ကျနေတာပါဗျာ ကျနော် ဆရာ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ ... တပည့်တစ်ယောက်ပါပဲ သင်တန်းလဲ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ... သင်တန်းဆိုရင် ပိုက်ပိုက်တောင်းမယ် စတာ နော် တကယ်မပေးနဲ့
ကဲဗျာ Premiere အကြောင်းကို ဆွေးနွေးသွားပေးမယ်။ ကျနော် တင်ပေးထားတဲ့ activate လုပ်တဲ့ video ဖိုင်လေးကို ကြည့်ပြီး activate လုပ်ရတာ အဆင်ပြေမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ … တင်လို့ အဆင်ပြေသွားပြီ ဆိုရင် Premiere ကို ဖွင့်လိုက်ပါဗျာ … activate လုပ်ပြီးသားဆိုရင် ခုမှလည်းစမှာ မို့ New Project ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်
+ DV - NTSC နဲ့
+ DV – PAL
ဆိုပြီး ရှိပါမယ်။ နှစ်ခုလုံးမှာ အတူတူပြထားပါတယ်။ ကျနော် တို့ က NTSC ပဲမို့ + DV – NTSC ကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီမှာမှ ထပ်ရှိပြန်တာက Standard NTSC video နဲ့ Widescreen NTSC video ဆိုပြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီမှာ ကျနော် သိသလောက်ပြောပြရရင်တော့ အရင်တုန်းက Standard ကိုပဲ သုံးပြီး ထုတ်ကြပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ မြန်မာ VCD တွေမှာ Widescreen နဲ့ ထုတ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ နှစ်သက်ရာကိ်ု ရွေးပေါ့ဗျာ။ DVD (သို့ ) VCD တစ်ခွေစာထုတ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိရင် အစောကြီးကတည်းက ဆုံးဖြတ်ထားပါ။ ဘာနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတာကို … Standard NTSC video (4:3 interlaced) ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုလုံးမှာ 32kHz က 12 bit ( audio ) အတွက်ဖြစ်ပြီး 48kHz ကတော့ 16 bit ( audio ) အတွက်ပါ။ ဒီမှာ video camera နဲ့ လုပ်ချင်သူတွေက video camera ထဲမှာ တစ်ခါတည်း setting တွေ ချိန်းခဲ့ရပါမယ်။ wide screen ၊ audio မှာ လည်း တစ်ခါတည်း ချိန်းပြီးမှ ရိုက်ဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်ဗျာ …
ခွေလုပ်မယ်ဆိုရင် သီချင်း ပုဒ်တိုင်းမှာ setting တူအောင် ရွေးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျာ ...
ကဲ ကျနော် တို့ ဒီမှာ နှစ်သက်ရာကို ရွေးပြီး ရင် ကျနော် အောက်က ပုံအတိုင်း အကုန်ပေါ်မပေါ် ကြည့်ပေးပါဦး။ ကျနော် လွယ်လွယ်လေးတွေနဲ့ပဲ မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် စရှင်းပေးပါမယ်။ သိပြီးသားသူတွေကတော့ ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးကြပါဗျာ …
အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း
ပုံလေးတွေထည့်ပြီး ရှင်းပြပေးပါမယ်။ အရင်ဆုံး ပုံထည့်ဖို့ အတွက် File -> Import … ( Ctrl + I ) လိုချင်တဲ့ ပုံလေးတွေရွေးပြီး Ok ပေးရင် 1 ထဲမှာ ပုံလေးတွေ ရောက်နေပါမယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ ကျနော် တို့ က ခွေတစ်ခွေစာလောက် လုပ်မယ်ဆိုရင် တစ်ပုဒ်ချင်းစီအတွက် သုံးတဲ့ ဖိုင်တွေ အများကြီး ရှိကောင်းရှိပါမယ်။ ဖိုင်တွေ အများကြီး သုံးမယ်ဆိုရင် အဲဒီ 1 ထဲမှာ right click -> New Bin ဆိုပြီး အောက်က ပုံအတိုင် folder ထပ်ဆောက်ပြီး တူရာ ဖိုင်လေးတွေကို စုထားပြီး အုပ်စုလေးတွေ ခွဲထားပေးမယ်ဆိုရင် ယူသုံးရတာလွယ်သလို ပြန်ရှာရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။
ခုကျနော် အဲဒီ 1 ထဲကနေ video track ရှိရာ5ထဲကို ပုံတစ်ပုံ ဒီတိုင်းပဲ ဆွဲ ထည့်လိုက်ပါ။ ဘာမှ မပြင်သေးပါဘူး ။2ကို ဆက်သွားပါမယ်။2မှာ ဆိုရင်
+ Effect Controls
ဆိုပြီး ၃ ခု တွေ့ရပါမယ်။
ကျနော် တို့ ခုဏက video track ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ပုံကို double click ပေးလိုက်ပါ။ Source မှာ ပေါ်ပါမယ်။ ကျနော် တို့ လုပ်ချင်တဲ့ effect တွေ ၊ ပုံတွေ ၊ videos ကို ဒီမှာ preview ကြည့်တဲ့ သဘောပါပဲ။
ဒီ ဟာကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျနော် တို့ သုံးမယ့် ပုံတွေ ၊ video တွေကို scale ကိုက်ပေးရပါမယ်။ မဟုတ်ရင် black screen ကြီးအပိုပါနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှာမှ
+ Motion မှာ postion ကတော့ ကျနော် တို့ သိထားပြီး ဖြစ်တဲ့ အတိုင်း ဘေး ဘယ် ၊ ညာ နဲ့ အထက် ၊ အောက် ပြောင်းလို့ ရပါတယ်ဗျာ … ။ scale ကတော့ အရွယ်အစား အကြီး အသေး ကျနော် တို့3က screen ကို ကြည့်ပြီး ချိန်ရမယ်ဗျာ။ တစ်ချို့ ပုံသေးသေးတွေကို screen နဲ့ ကိုက်အောင် အရမ်းကြီး မချဲ့ ပစ်လိုက်နဲ့ပေါ့ … ကိုက်တာထက် resolution အရမ်းကျနေရင် ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ ဂဏန်းတွေ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အစက် ကလေးတွေကို ဖိပြီး ဘေး ဘယ်၊ ညာ ဆွဲကြည့်ပြီး နေရာ နဲ့ ဆိုဒ်တွေကို ပြောင်းနိုင်သလို အဲဒီ ဂဏန်းနေရာတွေမှာ လိုချင်တဲ့ ဆိုဒ် နေရာ ကို ရိုက်ထည့်ပြီးလည်း ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဇာတ်လမ်းစပြီ … Ram အရမ်းနည်းနေရင် ပုံ ဆိုဒ် ပြင်တာတောင် ထိုင်စောင့်နေရပြီ … နောက် Rotation ကတော့ ကြိုက်သလို လှည့်လို့ရတယ်။ သူရဲ့ ဒီဂရီ ကိုလည်း အပေါ်က အတိုင်း ပြောင်းကြည့်ပေးပါ။ Opacity ကတော့ ကျနော်တို့ Ulead က transparent ပေးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ Ulead မှာ ရိုက်ထည့်လို့ ရသလို ဒီမှာ လည်း ရိုက်ထည့်လိုရပါတယ်။
ကတော့ အသံအနေအထား ညှိတာ။ အသံသွင်းထားတာဆို ညှိပေးမှ အဆင်ပြေပါမယ်။ နောက်ပြီး ခွေ အတွက်ဆိုရင် သီချင်း တစ်ပုဒ်မှာ အရမ်းတိုးနေပြီး နောက် တစ်ပုဒ်မှာ အရမ်းကျယ်နေတာမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင်ပေါ့ဗျာ … ကနော် တို့ က studio room တွေမှာ လို ဆိုထားတာမဟုတ်ရင် ညှိရပါမယ်...
3 ကတော့ဗျာ screen ပေါ့။ ကျနော် အခေါ်နော် … ပုံမှန်ကတော့ fit ပေးထားတာပါ။ သူကို အနီးကပ် အချိုးတွေ ပြောင်းကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ ….
4 မှာ ကတော့
ဆိုပြီးရှိပါမယ်။ + Info ကတော့ ကျနော် တို့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာ မရှိပါဘူး။
+ History မှာကတော့ ဂွတ်ဗျာ ။ ကျနော်တို့ photoshop က history လိုပါပဲ စဖွင့်ကတည်း ကတိုင် history တွေကို ဖော်ပြပေးနေမှာပါဗျာ … ဒီတော့ ဘာပဲ လုပ်လုပ် ရဲရဲ လုပ်လို့ရတာပေါ့။ မှားသွားရင် history ကနေပြန်ခေါ်လို့ ရတယ်လေ။ လိုရမယ်ရပေါ့ဗျာ … Ctrl + s ကလေးတော့ အကျင့်လုပ်ထားပေါ့ဗျာ … ကျနော်က ခံ ရဖူးတော့ သိနေပြီ ။ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ အစအဆုံး ပြန်လုပ်ရရင် မချောင်ဖူး။ ကျနော် ခုလည်း word ပေါ်မှာ တစ်ကြောင်းပြီးတာနဲ့ Ctrl + s ပဲ။ အကျင့်လုပ်ထားဖို့ပါ။ မလိုအပ်ဘဲ အချိန်မကုန်ရလေအောင်ပေါ့ဗျာ …
မှာကတော့ အများကြီးပဲ ဗျာ။ တွေ့ကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် လုပ်ထားတဲ့ effect လေးတွေကို စာအုပ်ကလေးနဲ့ မှတ်ထားရင် မဆိုးဘူးဗျ။ နောက် ဘယ်ချိန်ပဲ လုပ်လုပ် ဘယ်နေရာမှာ ဒီ effect ကို သုံးတော့မယ် ဆိုရင် တစ်ခုချင်း လိုက် မစမ်းရတော့ဘဲ ဘယ်အောက်က ဘယ် effect ကတော့ ဘယ်လို ရှိတယ် ပေါ့။ ပုံလေးနဲ့ ဆွဲထားရင် အသုံးဝင်တယ်ဗျ။ ရေရှည်ပေါ့ဗျာ …
5 မှာတော့ video tracks တွေ audio tracks တွေပေါ့ဗျာ … ကြိုက်သလောက် ထပ် add လို့ ရပါတယ်။ ခင်ဗျား စက် run နိုင်မယ် ဆိုရင် ကြိုက်သလောက် သာ add။
6 မှာတော့ tool တွေပါဗျာ … အခေါ်အဝေါ်တွေ သိချင်ရင် အဲဒီ tool ပေါ်မှာ point လုပ်လိုက်ရင် အမည်ပေါ်ပါတယ်။
2	4	5	6 ကို လုပ်ရင်းနဲ့ အသေးစိတ် ထပ်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ဗျာ … အဆင်မပြေတာနဲ့ ချက်ချင်းမေးနိုင်ပါတယ်။
အဆောင်မှာ ယူပြီး ဖတ်နေတဲ့ ကို paulgyi အတွက်
ဒီနေ့ ရေးထားတာတွေ ဒီမှာ
ဒီထဲက စိတ်ဝင်စားပြီး တကယ်လုပ်တဲ့သူတွေ အားလုံး ကျနော်ထက် ပိုပြီး ပိုလုပ်တတ်ရမယ် လို့ခံယူထားပါတယ် ကျနော် အစွမ်းရှိသလောက် ကျိုးစားပေးပါမယ် ...လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြနော် ...
ဖတ်တဲ့ သူတွေ ရှိနေသ၍ ကျနော် ကျိုးစားပြီး တင်ပေးပါမယ် ... ဒီလို course သဘောမျိုး လုပ်ပြီး မရှင်းပြဖူးပါဘူး။ လာမေးတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် တကယ် မလုပ်ကြလို့ အချိန်ကုန်လို့ detail ကြီးလည်း မရှင်းပြဖူးဘူး။ ကျနော် လုပ်နေပေမယ့်လည်း ကျနော် နားလည် သလို ရှင်းထားတာပါ။ video & book ကလေးတွေလဲ တင်ပေးပါမယ် ... အဆင်မပြေတာလေးတွေ ရှိရင်တော့ အားမနာကြပါနဲ့ ... အကြံပေးမူ့ ၊ လမ်းညွန်မူတွေ ကို ကြိုဆို လျှက်ပါဗျာ
Last edited by bonge; 30-01-2009 at 08:45 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 27 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ကွက်တိ, ဒဿဂီရိ, ဖန်ဆင်းရှင်, ဖိုးထိန်, ဖယောင်း, ရှင်းလေး, ဝင်းအောင်, သားညို, ဇော်ရဲပိုင်, မြန်အောင်သား, aung myint, Ei Hninn, hlamyoswe, ko myo, kyansitthar, nyi nge, paulgyi, phoepa1982, smlat88, thetzin, thurein, tu tu, wahgyi, yawnathan, youngman47, zinnaing
31-01-2009, 01:19 AM
အစ်ကိုရေ ဒီတော့ပစ်လေး ဖွင့်ထားတာ သတိမထားမိဘူး။ခုမှတွေ့တယ်။ညီလည်း သင်တန်းဝင်တက်နေတယ်နော်။
ကိုယ်တိုင်ခွေလေး တစ်ခွေလောက်ဖန်တီးဖူးတဲ့ ပီတိလေးကို မိသားစုဝင်တွေ ရအောင် သိသလောက်၊တတ်သလောက်မျှဝေ ပေးနေတာ တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ libra484 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, bonge, kyansitthar, thetzin
Find More Posts by libra484
ဆရာရေ Premiere Version 2.0 အဲလင့်က ဒေါင်းလုပ် ဆွဲလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ပေ ကတ်ကတ်လုပ်နေတယ် အဲဒါလေးကို ဆရာ့ အနေနဲ့ငေါက်ငန်းပေးလိုက်ပါဦး အဲကောင်လေးကို ဆရာရဲ့ ဖော်ရွေ မူ့ ကိုလည်း ကျနော်တို့ အားကြတယ် လေးလည်းလေးစားတယ် ဗျာ ဒီထက်မက ပို့ စ်တွေ အများကြီဆက်တင်သွားနိုင်ပါစေလို့ကျနော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ပီးတော့ ဆရာ့ အတွက် လက်ဆောင်တွေ ယူလာတယ် အားမနာနဲ့ နော် ဒါပဲတပ်နိုင်လို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ win zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ဖယောင်း, bonge, kyansitthar, phoepa1982
ကဲ ကို win zaw ရေ ...
ဒီမှာ ဗျာ မြန်မြန်လေး ဆွဲ 24 နာရီ ( တစ်ရက် ) ပဲရလို့ပါဗျာ ... အိပ်မယ်တော့ မကြံနဲ့နော် အများကြီး မပေးပါနဲ့ ရပါတယ်ဗျ ကျနော် မိသားစုကနေ ယူတာ အများကြီးပါ ... ကျနော် ပေးနေတာ မပြောပလောက်ပါဘူး ကျနော် ပေးတာလေးတွေ ရအောင် ယူသွားနော်
ကျနော် မှာ ရှိတာလေးတွေတော့ တင်ပေးလိုက်ပြီဗျာ ...
ကျနော် တို့ ဖြည်းဖြည်းပဲ သွားကြမယ်နော် ... တအားကြီးတော့ မနှေးအောင် ကျိုးစားပေးပါ့မယ် ...
အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် မိသားစုကို နေ့တိုင်းလာဖို့ အခက်အခဲရှိတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမများက ကျနော် ကို မေးလ် address လေးတွေ စာချွန်လွာ နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပို့ခဲ့ ထားခဲ့ပါ။ ကျနော် ဆွေးနွေးတာလေးတွေ ဖတ်လို့ အဆင်ပြေအောင် ကျနော် ပို့ပေးပါ့မယ် ဗျာ ... အားမနာပါနဲ့ ... ကျနော် အဆင်ပြေအောင် ကျိုးစားပေးပါ့မယ်ဗျာ ...
ပညာပြည့်ဝ နှလုံးလှကြပါစေ ...
Last edited by bonge; 07-02-2009 at 05:21 PM..
ကိုလေးအောင်, ဖိုးထိန်, မင်းသီဟထွန်း, ဝင်းအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, aung myint, aungzaw, hlamyoswe, kyansitthar, paulgyi, phoepa1982, smlat88, thetzin, thurein, tu tu
ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ဆရာရယ် ကျနော် ခု ယူထားတယ် တိတ်တိတ်လေး ဘယ်သူမှမသိအောင် ဟဲဟဲ ဆရာပြေားသလို မ ၈ တော့ပါဘူး နောက်ဆို ရိုက်ခံနေရမှာ စုိးလို့
ကျေးဇူးပါ rpely ပြန်တာအရမ်းမြန်လို့
ကျွန်တော်က ၀ါသနာအရ ဟိုစမ်းဒီစမ်းနော် .... တောသားရေကူးလို့ပြောလို့ရတယ် ကူးတော့ကူးတတ်တယ်
အဟဲ.. ကူးနည်းတော့မှန်ခြင်မှမှန်မယ်လေ အဲလိုအဲလို
အရင်က ကျွန်တော် video ကို sony က mini DV digital နဲ့ရိုက်တယ်ဗျာ
ပြီးတော့ ulead ဒါမှမဟုတ် premier နဲ့ edit လုပ်တယ် ok တယ် တခါတလေ show biz နဲ့တောင်လုပ်တယ်
အခု ကျွန်တော် video camera အသစ်ထပ်ဝယ်လိုက်တယ် ပြီးတော့ အဲဒီမှာ စတွေ့တာ
Sony ux10E ပါ resolution က 1920x1080 အထိရတယ်၊ DVD ရော Memory မှာပါရိုက်လို့ရတယ် (Hybrid ပါ)။ ခက်တာက ကျွန်တော် computer က pentium4, 3GHz, memory 2GB.AGP က 128MB FX 5500 nvidia လေ.. ဒါကြောင့် video ရိုက်ရင် hi resolution ကရိုက်ပြီးရင် edit လုပ်မယ်ဆို စက်က မနိုင်ဘူး၊ video camera မှာက format ကို HD ရယ် SD ရယ် ၂ မျိုးရှိတယ်လေ၊ HD က high definition ပေါ့ SD က standard definition ၊ တစ်ခုစီမှာနောက်ထပ် quality ၃ မျိုးထပ်ချိန်းလို့ရတယ်
premire က SD နဲ့ရိုက်တဲ့ format ကိုပဲဖတ်တယ်၊ အဲဒါကျတော့ camera ရဲ့ quaility ကိုအပြည့်မ၇တော့ဘူးလေ
edit လုပ်ပြီး .avi နဲ့သိမ်းရင် တော့ quality နဲနဲကောင်းတာရတယ်
pinnacle ကလဲရတယ်ပြောလို့ စမ်းတော့လဲ HD နဲ့ရိုက်ရင်မဖတ်ပြန်ဘူး၊ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် computer အသစ်တလုံးထပ်ဝယ်မလားလို့ system requirement ကို မေးတာပါ၊ SD မှာ high quality နဲ့ရိုက်ရင်တော့ DVD quality ရပါတယ်၊ အခု ကျွန်တော်စမ်းသုံးတာက စက်ဝယ်တုန်းက ပါတဲ့ sony vegas ဆိုတဲ့ software ပါ၊
သူကတော့ HD ကို support လုပ်တယ်ပြီးတော့ 5.1 surround sound ကိုလဲsupport လုပ်တယ်၊
ဒါပေမယ် ကျွန်တော်computer က HD ကိုမနိုင်တော့ edit လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာ.. စက်ဝယ်ဖို့ကြတော့လည်း အများကြီးထပ်မရင်းခြင်လို့ဟိုလျောက်မေးဒီလျောက်မေးကြည့်တာ သိသလောက် အကြံပေးပါဦး စောင့်နေပါ့မယ်
အဲ နောက်အရေးကြီးတာတခုက ကျွန်တော်က လောလောဆယ် sg မှာ ဒါကြောင့် software တွေကိုအလွယ်တကူ ၀ယ်စမ်းလို့မရ လို့ပါ
Last edited by mrzaw; 02-02-2009 at 11:00 AM..
ကိုလေးအောင်, kyansitthar, thetzin
ကျနော် sony မှာတုန်းက DVD ပါပေမယ့် ပြန်ပြီး format ပေးရတာရယ် ကိုယ်တိုင် edit ပြန်လုပ်ချင်တာကြောင့် ကျနော် သူထဲမှာ ပါတဲ့ memory ကိုပဲ G များများထပ်ဝယ်ပြီး သုံးလိုက်ပါတယ်။ DVD ပါပေမယ့် ဒီနေ့ထိကျနော် မသုံးဘူး။ ဆောင်ထားယုံပါပဲ။ memory card နဲ့ ကြတော့ အတော်ကြီး ကို အဆင်ပြေလို့ပါ။ ကျနော် premiere 1.5 စသုံးတုန်းက P4 3.2 , Ram 512 နဲ့ run ပါတယ်။ premiere 2.0 သုံးတော့ နောက် Ram 512 ထပ်ဖြည့်ပြီး run တယ်။ တချို့ psd တွေ သုံးတာ အရမ်းများနေရင် တစ်ရက် လောက် ကို စောင့်ရတယ်ဗျာ ... output ထွက်ဖို့ အရေး ...။ ကျနော် အကြံပေးနိုင်တာ က တော့ အပျော်လောက်ပဲ သုံးနေတာ ဆိုရင် ထပ်လည်း မ၀ယ်ချင်တော့ရင် လက်ရှိသုံးနေတာကိုပဲ စိတ်ရှည်ရှည်လေး သုံးပေါ့ဗျာ ... သိပ်ကို professional ကျကျ သုံးချင်တာဆိုရင်တော့ လည်း တစ်နည်းပေါ့။ soft တွေက တော့ ဒီမှာ တောင်းလဲ ရှိတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေက တင်ပေးကြမှာပါ။ soft အတွက်က မပူရပါဘူး။ ကျနော် ဆီမှာ လည်း premiere 3.0 ရှိနေပါတယ်။ အတော်ကြီးလေးပါတယ်။ 4.0 ထွက်နေပေမယ့် အရမ်းလေးလို့ dl မလုပ်ဘူး။ သဘောက အတူတူဖြစ်လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြစ်အောင် premiere 2.0 ကိုရွေးထားပါတယ်။ ကျနော် တခြား အလုပ်တွေလည်း လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့။ စိတ်ရှည်မယ် ဆိုရင်တော့ လည်း ခင်ဗျားလက်ရှိစက်အနေအထားနဲ့ premiere 1.5 လောက် ကို သုံးမယ် ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဗျာ ... soft တွေ မြင့်လာတာ မှန်ပေမယ့် ကျနော် တို့ သုံးချင်တာ ကျနော် တို့ စက်က လက်ခံနိုင်တာ လောက် ကို ရွေးသုံးကြရမှာပေါ့။ soft မြင့်တာက အဲလောက် အရေးမကြီးပါဘူး ကျနော် တို့ လုပ်ချင်တာလေးတွေ ကျနော် တို့ မှာရှိနေတာလေးတွေနဲ့ result အဆင်ပြေပြေလေး ရလာဖို့ က ပိုအရေးကြီး မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော် အထင်ပါဗျာ
စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ တစ်ချို့ မိသားစု ကို အမြဲလာဖို့ ခက်ကောင်းခက်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ကျနော် basic က စဆွေးနွေးပါတယ်။ ခင်ဗျား လည်းတော်တော်များများ သုံးထားတယ်ဆိုတော့ ဒီမှာ ဆွေးနွေးပေးလို့ရပါတယ်ဗျာ ... မသိသေးတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေ အားလုံး သိအောင် အဆင်ပြေအောင် သိတာလေး ကို မျှဝေကြတာပေါ့ ... ဘယ်သူဆွေးနွေးလို့ ပဲ အဆင်ပြေပြေ မသိသေးတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အဆင်ပြေသွားဖို့ ပဲ ကျနော် အလေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိပြီးသားသူတွေကလည်း သိတာလေးတွေ ဒီမှာ ဆွေးနွေးကြပါလို့ ...
Last edited by bonge; 02-02-2009 at 05:32 PM..
ကိုလေးအောင်, ဖိုးထိန်, ကျော်ကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, kyansitthar, paulgyi, smlat88, thetzin
နောက်နေ့မှ ကျွန်တော် video အပိုင်းလေးတင်ပေးပါမယ်.. ကျွန်တော်ကိုစမ်းပေးပါ ဘယ် software သုံးလို့ရမလဲဆိုတာလေးကို
Last edited by mrzaw; 04-02-2009 at 08:17 AM..
ကျွန်တော် တခုတော့ မေးပါရစေ ၊ ကျွန်တော်လဲ Ulead video editor 11 ကိုသုံးနေတာပါ ၊ ကျွန်တော်က ခုမှစသုံးတာပါ ၊ ခုကျွန်တော် သီချင်းတပုဒ်လုပ်လိုက်တာ ရသွားပါတယ် ၊ နောက်တပုဒ်လုပ်ပြီးတော့ create video file ပြောင်းတဲ့အခါမှာ အခက်ကြုံနေလို့ပါ ၊ Rendering 83% လောက်ရင် Ulead unable to load library ဆိုတဲ့ warning စာတမ်းပေါ်လာပြီး ရပ်သွားပါတယ် ။ အဲဒါ ကိုယ် edit လုပ်လိုက်တဲ့ video ကို ဘယ်လို output လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေရှင်းပေးပါအုံးဗျို့ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ aunglinn အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by aunglinn
ကို aunglinn ခင်ဗျာ ...
video ဖိုင်တိုင်း ထုတ်လိုက်တိုင်း ဖြစ်နေတာလား ... ဒီတစ်ပုဒ်မှာပဲ ကွက်ဖြစ်နေတာ ဆိုရင် အဲဒီ တစ်ပုဒ်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ် ... အဲဒီ တစ်ပုံကို ပဲ နည်းနည်းပြင်ပြင်ကြည့်ပါ ... ကျနော်လည်း ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ulead ကို ပြန်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်တာမျိုး ... စက်ကို restart ချကြည့်ပေးတာမျိုး ... အဲဒီထဲက ခင်ဗျား သုံးနေတဲ့ တစ်ချို့ effect တွေကို ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ပြန်ပြင်ကြည့် ... ကြောင်တတ်ပါတယ် ...video ဖိုင်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် ...
ကဲ ဆက်ဆွဲလိုက်ကြရအောင်ဗျာ ...
ကျနော် ခု premiere ထဲက အရေးပါတဲ့ timeline အကြောင်းကို ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ဗျာ ... အောက်ကပုံလေးပါ ...
ကျနော် အနီစက် ချထားတဲ့နေရာလေးက အစလေးကို ဘယ်ညာ ဆွဲကြည့်ပါ … time line ချုံတာချဲတာဖြစ်ပါတယ် …။ အလွန်အရေးပါပါတယ် ခင်ဗျာ … ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဥပမာ ကျနော် ထည့်ထားတဲ့ သီချင်းကို ကျနော် ဖြတ်ကြည့်မယ် … ဘယ်ဖက် ကို ဆွဲရင် ချဲတာပါ … ညာဖက်ဆိုရင် ချဲတာပါ။ အဲလို မမှတ်ချင်ရင်လဲ အဲဒီ line လေးတိုသွားရင် ချဲတာ … ရှည်လာရင် ချုံတာ … ( သိပြီးသားတွေကတော့ စိတ်ရှည်ပေးဗျာ… မသိသေးသူတွေ အတွက် အသေးစိတ်ရှင်းလိုက်မယ်ဗျာ ) ချုံကြည့် ချဲကြည့်ပါ။
မြင်သာအောင် ပုံလေးတွေနဲ့ပြလိုက်ပါမယ် …
ချဲတဲ့အနေအထား ပုံ ( ၂ )
ချုံတဲ့အနေအထား ပုံ ( ၃ )
ဘာကြောင့် ကျနော် က ဒီလောက်တောင် time line ကို အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောနေရပါလိမ့်ဗျာ … ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဥပမာ ဖြတ်တော့မယ် ဆိုရင် တိတိကျကျ ပိုမနေရအောင် ချဲ့ဖြတ်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ် …
နောက် တစ်ခု က ခင်ဗျား ဆိုထားတဲ့ သီချင်း ကို သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ video ဖိုင်လေးတွေ နဲ့ တွဲသုံးချင်တယ်ဆိုပါတော့ …
ဆိုထားတာကတော့ အခန်းမှာ အမှန်အကန် ဟဲထားတဲ့ သီချင်းပေါ့ဗျာ …
အဲဒီ သီချင်းကို အပြင်မှာ video ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ထားပြီး ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ တွဲချင်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ …
ကျနော် ဒီနေရာမှာ အကြံပေးချင်တာက ရူ့ခင်းကောင်းတဲ့ နေရာမှာ ဆိုမယ် အဲဒီ အပြင်မှာ ဆိုခဲ့ တဲ့ ဖိုင်ကို ယူသုံးမယ် ဆိုရင် လည်း အတွင်းမှာ အလုံပိတ်ခန်းထဲမှာ အမှန်အကန်ဟဲထားတာလောက်တော့ မကောင်းဘူးဗျ … vcd တွေမှာ တွေ့ဖူးမှာပါ … လမ်းလျှောက်ရင် သရုပ်ဆောင်တွေက အဲဒီ သီချင်းကို ဆိုနေတာ … မျက်စိထဲပေါ်အောင်လို့ပါဗျာ … အဲဒီလို သုံးတော့မယ် ဆိုရင် အကြံပေးချင်တာက သီချင်းအလိုက် ကို ဘယ်လောက်ပဲ အလွတ်ရရ ဆိုမယ့် ခင်ဗျားဆိုထားတဲ့ သီချင်းကို အပြင်ကို ယူသွားပြီး အဲဒါကို ဖွင့် အဲဒီ အတိုင်းလိုက်ဆိုပေါ့ … ကျနော်လည်း အရင်ဆုံး recorder နဲ့ အရင်သွင်းယူထားတယ် …
သိပ်မြင်ကွင်းကောင်းပြီး လူနည်းနည်းရှင်းရင် သွင်းလာခဲ့တဲ့ recorder လေး အသံကျယ်ဖွင့် video ထဲမပါအောင် တစ်ခုခုနဲ့ ဖုန်းထဲ ပြီး ဟဲလိုက်တာပဲ …
ဘာကြောင့် အဲလို လုပ်ဖို့ လိုလည်းဆိုတော့ အဲဒါမှ ခင်ဗျား အပြင်မှာ ပါးစပ်လှုပ်ပြီး ဆိုခဲ့တဲ့ video ဖိုင်ကို အတွင်းမှာ ရှယ် ဟဲထားတဲ့ ဖိုင်နဲ့ တွဲရတာ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ် … အလွတ်တမ်းဟဲရင်တော့ audio ဖိုင်နဲ့ ပြန်ညှိတဲ့ အခါ အဆင်မပြေတတ်ပါဘူး။ recorder ဖွင့်ပြီး လိုက်ဆိုရင်တောင် လမ်းသွားရင်း ကြည့်တဲ့သူရှိရင် အမ်းပြီးတော့ key လွဲသွားတတ်ပါတယ်။ သီချင်းဖွင့်ထားတာဆိုတော့ တီးလုံးနဲ့ မှီရာက ဆက်လိုက်လို့ရပါတာပေါ့ဗျာ ...
အဲဒီ ဖိုင် နှစ်ဖိုင် ကို ဆက်တော့မယ် ဆိုရင် ညှိရတော့မယ် ပိုတာလိုတာလေးတွေ ဖြတ်ရတော့မယ်လေ …
အဲတော့ အတိအကျလေးဖြစ်သွားအောင် time line ကို ချဲ့ထားရပါမယ် …
ဖြတ်တာနဲ့ ညှိတာကတော့ နောက် မှ ဆက်ရေးပေးပါမယ်။ ဒီထိ အဆင်ပြေရင် …
video track add ထာကို ကျနော် ပုံနဲ့ ဆက်ပြပါမယ် ... အောက်က ပုံပါဗျာ ...
ပုံမှာတွေ့ရတဲ့ video 1 နားမှာ right click နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ ထဲက Add Tracks ကိုရွေးပါ။
အဲလိုနည်းနဲ့ အလိုရှိသလောက် videos & audio files တွေကို ကြိုက်သလောက် add လို့ရပါပြီဗျာ ...
ခုတွေ့နေရတဲ့ video ဖိုင်ကို ဆွဲကြည့်ပါ။ audio ဖိုင်ပါ တွဲလျှက်ကြီးပါလာပါမယ် ... အဲလိုပါပဲ audio ဖိုင်တစ်ခုတည်းကို ဆွဲရင်လည်း video ဖိုင်ကြီးပါ ပါလာပါမယ်။ တွဲလျှက်ကြီးဆိုတော့ တစ်ခုဆီ ခွဲလို့ မရဘူး။ အဲတော့ တစ်ခုကို လော့ချမယ် ... အောက် က ပုံကို ကြည့်ပေးပါ။ video ဖိုင်ကို lock ချရင် audio ဖိုင်တစ်ခုတည်းကို ကြိုက်သလို ဆွဲပြီးပြောင်းလို့ရပါပြီ။ အဲလိုပါပဲ audio ဖိုင်ကို lock ချထားရင် လည်း video ဖိုင်ကို ပြောင်းလို့ ရွေ့လို့ရပါပြီ ...
ကျနော် အနီဝိုင်းထားတဲ့နေရာလေးကို ပဲ click တစ်ချက်ပေးရင် lock ဖြစ်သွားပါပြီ ... ဒီထိအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားကြည့်ပေးပါဗျာ ... အဆင်မပြေတာနဲ့ ချက်ချင်းမေးပါဗျာ ...
ကို paulgyi ခင်ဗျာ ... ထုံးစံအတိုင်း ဒီ နားလေမှာ ယူသွားပါဗျာ ...
Last edited by bonge; 05-02-2009 at 05:11 AM..
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဖိုးထိန်, ဝင်းအောင်, သစ္စာလင်းလင်း, ကျော်ကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, aung myint, boya, paulgyi, smlat88, stability09, thetzin, thurein
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို ၊ ဖိုရမ်မှာဒီလိုပိုစ့် ကိုတင်ပေးလို့ လေအရမ်းကောင်းပါတယ်၊ ညီမလေးစိတ်ဝင်စားလို့လာလေ့လာသွားတယ်နော်၊ ဆက်ပြီးလည်း လေ့လာအုံးမေ၊ သိတာရှိရင် ဆက်ပြီးဝေမျှပေးပါအုံး။ မသိတာတွေကိုလည်းဆက်လက်ကူညီအုံးနော်၊
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ myatnoethu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bonge, boya, minminc, paulgyi, thetzin
ခုလို သိချင်တာကို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် Bongeိကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ၊ အရင် video file တခု ထုတ်တာရပါတယ် video file်မှဖြစ်တာပါ ၊ ကို Bonge ပြောသလိုမျိုး ကြောင်တာပဲဖြစ်မှာပါ ။ နောက်တပုဒ်စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ် ၊ ပြီးရင်ပြန်ပြောပါ့မယ် ။ လိုချင်တာ သိချင်တာလေးတွေလဲ ဖြေကြားပေးပါအုံးဗျာနော် ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ aunglinn အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, minminc, paulgyi, thetzin
တင်မယ် တင်မယ် နဲ့ ဗျာ … ဖတ်တဲ့ သူတွေ တော့ ရှိအုန်းမလားပဲ …. တစ်ယောက်ရှိရင် ကျနော် တင်ရကြိုးနပ်ပါပြီ …
5 edit အကွက်ထဲက အကြောင်းပဲ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါမယ် ဗျာ …
ဒီတူးလေး က တော်တော် လေး ကို အသုံးတည့်ပါတယ် ဗျာ … အလွယ်တကူ ဖြတ်လို့ တောက်လို့ ရတာကိုး … tilmeline ကို ကြည့်ပြီး ဖြတ်လို့လည်း ရပါတယ် …. ဖြတ်တဲ့ အခါမှာ သတိပေးချင်တာကတော့ timeline ကို ချဲ့နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန်ချဲ့ပြီး ဖြတ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ဗျာ … ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ video ဖိုင်တွေ အပိုအလို မရှိ တိကျပါတယ်။ ချုံထားတဲ့ အနေအထားမှာ ဖြတ်ရင် ကွာဟ မူ့တွေ အများကြီး ရှိလာနိုင်ပါတယ် ဗျာ … Ulead မှာတော့ ကတ်ကြီးပေါ့ဗျာ …
ဖျက်ပြထားတဲ့ ပုံလေးပါ ...
ဒီတူးနဲ့ ဖိုင်တွေ ကို လို တဲ့နေရာကို ဆွဲသွားလို့ ရပါတယ်။ ဖိုင်လိုက်ပေါ့နော်။ သီခြားစီးပဲ ဆွဲချင်တာဆိုရင်တော့ တစ်ဖိုင်ကို Lock ချပြီး ဆွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ....
marker ပေးတာကလည်း တော်တော်အရေးပါပါတယ်ဗျာ … ဥပမာ သီးခြားစီဖြစ်နေတဲ့ အဆိုဖိုင်နဲ့ သရုပ်ဖော်ဆိုထားတဲ့ video ဖိုင် စပ်တော့မယ် ဆိုရင် marker လေးလေးပေးပေးပြီး မှတ်သွားရတာ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်… တခြား သီချင်းအချိန်မှတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး edit mode ထဲမှာ မှတ်သားထားချင်ရင် သုံးနိုင်ပါတယ် … ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းရတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ ….
edit mode ထဲမှာ copy&paste လုပ်ဖို့ အတွက် အရင်ဆုံး razortool နဲ့ ဖြတ်ကြည့်မယ် … ဖြတ်လို့ ရတဲ့ ဖိုင်ကို select လုပ်ပါ …ပြီးရင် copy ပေါ့ဗျာ … ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း paste လုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာ အနီလိုင်းလေး ကို ထားပြီး paste ချလိုက်ရင် ပုံမှာတွေ့ရတဲ့ အတိုင်း ကူးထားတဲ့ ဖိုင်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
ဖျက်တာကတော့ အရမ်းကို လွယ်ပါတယ်ဗျာ … ဒါပေမယ့်လည်း သိအောင်ပေါ့ဗျာ … ပုံမှာ ပြထာတဲ့ အတိုင်း လိုချင်တဲ့ အပိုင်းလေးကို ပဲ ရွေးပြီး ဖျက်သွားနိုင်ပါတယ် ဗျာ … မလို ချင်တဲ့ အပိုင်းတွေ ကို Lock လုပ်ထားပါတယ် ….
အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေ က keyframe ဖျောက်တာနဲ့ ဖော်တာပါဗျာ … အမြဲဖော်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ …
keyframe ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ ဆိုတော့ ကျနော် အနီနဲ့ ပြထားတဲ့ နေရာမှာ add/remove keyframe ဆိုတာရှိပါတယ် ဗျာ … အဲဒါကို နှိပ်နှိပ်ပြီး ကျနော်တို့ အမှတ်ပေးမယ် … ကျနော်တို့ ဗျာ တစ်ချို့ သီချင်းတွေ က အစကတိုင်တော်တော်ကြဲတယ်ဗျာ … အဆုံးမှာ လည်း တိကနဲကြီးဆိုရင် နားထောင်ရတာ အတော်ဆိုးတယ်ဗျာ … မကော်နီ live show မှာ ပဲကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ် … တိကနဲကြီး ကြေငြာတဲ့ သူ မဆုံးပဲ အသံတွေ ထပ်နေပြီး ပျက်သွားတာမျိုး … အဲလို မျိုးမဖြစ်အောင် ကျနော် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း keyframe အမှတ် နှစ်ခုပေးပြီး နှိမ့်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေမှာပါ … ပထမဆုံးမှာ ဆိုရင် အသံဖြည်းဖြည်းချင်း ကျယ်လာတာမျိုး နောက်ဆုံးမှာ ဆိုရင် အသံတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိမ့်သွားတာမျိုး … ကျနော်ကတော့ classical ကို ကြိုက်တော့ အဲလို မျိုးလေးတွေကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။video ဖိုင်မှာ ဆိုရင်တော့ opacity ပေးတာနဲ့ အတူတူပါပဲဗျာ ….
ကိုလေးအောင်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဝင်းအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်မောင်လေး, aung myint, khoungchee, kokomaung.ko28, Myo Min Zaw, nawkhae, paulgyi, stability09, thetzin, thurein, tinnyinyiwin, yawnathan